Nababuthi - Xhosa - Inglês Tradução e exemplos
Você procurou por: nababuthi (Xhosa - Inglês)
kweza ke nababuthi berhafu ukuba babhaptizwe, bathi kuye, mfundisi, masenze ntoni na?
bathi bonke abantu, bakuva, nababuthi berhafu, bagwebela uthixo, bebhaptiziwe ngobhaptizo lukayohane.
kuba xa nithe nathanda abo banithandayo, ninamvuzo mni na? abenzi kwaloo nto yini na nababuthi berhafu?
bakukubona oko abafarisi, bathi kubafundi bakhe, kungani na ukuba umfundisi wenu adle nababuthi berhafu naboni?
u have any girls friend (Inglês>Hindi)žymiklis (Lituano>Inglês)aisi baat nahi hai (Hindi>Inglês)kasalungat ng mabaling (Tagalo>Inglês)ringrazio e rinnovo gli auguri (Italiano>Inglês)فیلم سوپر بچه (Francês>Inglês)meaning urge (Inglês>Tagalo)habst (Alemão>Inglês)efetivação (Português>Espanhol)dokumentalny (Polonês>Espanhol)have you got a lot of friends (Inglês>Russo)sir ne mujhe kaha (Hindi>Inglês)earum partem (Latim>Inglês)hasta pronto y un beso de amor (Espanhol>Alemão)diuretikum (Eslovaco>Inglês)divisional officer (Inglês>Suaíli)verzekeri (Holandês>Francês)openswan (Dinamarquês >Inglês)i feel so lonely without you (Inglês>Hindi)sottosuolo (Italiano>Sueco)knock out pot (Inglês>Italiano)কেমন আছেন (Bengali>Hindi)i live in london (Inglês>Hindi)è il compleanno di sunita (Italiano>Inglês)cita cita saya adalah menjadi seorang jururawat (Malaio>Inglês)